जिज्ञासा र जवाफ - Shikshak Maasik
by • • जिज्ञासा जवाफ • Comments (0) • 2349
विव्यस: अब के हुन्छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यार्थीका परिवारमध्येबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका अभिभावक न्यून संख्यामा हुन्छन् भने अर्कोतिर उनीहरू आफ्नो छुट्टै व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्छन् । धेरैले शैक्षिक प्रशासन बुझेका हुँदैनन् र तिनलाई विद्यालयमा दिने समय पनि हुँदैन । उनीहरूको काम खाली अरूले गरेको निर्णय र चेकमा साइन गर्ने मात्र हो । त्यसैले विद्यालय रहेको स्थानका प्रतिष्ठित र विज्ञहरूमध्येबाट समितिको अध्यक्ष चयन गर्नु जरूरी देखिन्छ । शिक्षक, २०७३ असार अंकको पृष्ठ ३० मा ‘अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन यसरी हुन्छ’ भनी— लेखिएका कुराहरू जस्तै, अभिभावकमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना, वडा समितिका पदाधिकारीमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना, वडा समितिका पदाधिकारीमध्येबाट एक जना, शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी र चन्दा दातामध्येबाट दुई जना अनि त्यही बाँडफाँड अनुसार निर्वाचन वा मनोनयनबाट सात जना सदस्य चयन गरिसकेपछि सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष चुन्ने प्रक्रिया वैधानिक, समयसापेक्ष र सान्दर्भिक लाग्यो । मेरो विद्यालयमा गठन भएको विव्यसले कारणवश अध्यक्षको उपस्थिति विना नै प्रशासनिक काम गरिरहेको देखिन्छ । अब बीचमा समिति गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? ऐनको नयाँ प्रावधान र प्रक्रियाअनुसार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
प्रभा खनाल, नन्दी मावि, नक्साल, काठमाडौं
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ ले सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्थासहित संशोधन गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा यस अगाडिको व्यवस्था अनुसार गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सबै विद्यालयले व्यवस्थापन समिति नयाँ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैकुण्ठ अर्याल, निर्देशक, शिक्षा विभाग
मैले कति ग्रेड पाउँछु ?
म २०५२ सालको आयोगबाट प्रावि तृतीय श्रेणीमा स्थायी भई २०६१/०२/१५ मा नियुक्ति लिई हालसम्म नियमित काम गर्दै आएको छु । २०६९/१२/०१ बाट नोकरीको ज्येष्ठता कायम हुने गरी द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा २०६९ (मंसीर–फागुन) को चौमासिकमा मेरो तलब द्वितीय श्रेणीको भन्दा रु.५० बढी थियो । हालको चौमासिक (२०७२ चैत–असार) मा मेरो ग्रेड २ मात्र कायम भएर आयो । मैले २ ग्रेड भन्दा बढी पाउने होइन र ? मैले पाउने खास ग्रेड कति होला ?
निर बस्नेत, श्री कालिनाग उमावि सिङ्गटी, सिङ्गटी–६, लामीडाँडा, दोलखा
बढुवामा उल्लेख गरिएको मिति अनुसार ग्रेड संख्या निर्धारण हुन्छ । जहाँसम्म ज्येष्ठताको कुरा छ, त्यो हाल कार्यरत श्रेणीभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा गणना हुन्छ । २०६१/२/१५ मा नियुक्त भएको शिक्षकको २०६३ बाट ग्रेड संख्या निर्धारण गर्दा बढुवा भएको मितिभन्दा अगाडि ७ ग्रेड हुन्छ । १ ग्रेड बराबर रु.११० हुने हुँदा ७ ग्रेडको रु.७७० हुन्छ । बढुवा हुँदा बढुवा मितिमा प्रावि तृतीयको ग्रेड सहितको तलब हिसाब गर्दा रु.१४,४२० हुन आउँछ र सोही मितिमा प्रावि तह द्वितीय श्रेणीको तलब रु.१४,४८० भएकोले तपाईंको समायोजन ग्रेड माइनसमा भएको हुँदा समायोजन ग्रेड आउँदैन । बढुवा भएको मितिले शैक्षिक सत्र पूरा भएपछि द्वितीय श्रेणीको नम्र्स अनुसार ग्रेड कायम हुन्छ ।
असाधारण विदा, बेतलबी विदा, विभागीय कारबाही, बढुवा रोक्का नभएको तथा सेवा निरन्तर रहेको अवस्थामा तपार्इंको २०७३ वैशाख १ गतेदेखि ३ ग्रेड हुने जानकारी गराउँदछु ।
रवीन्द्रकुमार बुढाप्रिथी, उपनिर्देशक, विद्यालय शिक्षक किताबखाना
राहत शिक्षकको अवधि कहिलेसम्म हो ?
‘एसएसआरपी’ कार्यक्रम समाप्त भएर ‘एसएसडीपी’ को कार्यक्रम शुरूआत भएको अवस्थामा राहत शिक्षकको समयावधि पनि थप भई सन् २०२२ पुग्यो भन्ने सुनिन्छ, सत्यता के हो ?
राजेश थापा, शारदा उमावि, बेखटाडी, सिन्धुली
शिक्षक अनुदान कोटा अर्थात् राहतमा कार्यरत शिक्षक— विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा सिर्जना भएको अनुदान कोटा हो । त्यसैले विद्यार्थी संख्या अनुरूप शिक्षकको आवश्यकता रहेसम्म शिक्षक अनुदान कोटा अर्थात् राहत कोटा कायमै रहन्छ । अतिरिक्त विद्यार्थी नै भएनन् भने त्यस्तो कोटा पनि नरहला ।
मेरो ग्रेड थप हुन्छ कि हुँदैन ?
२०६० सालमा निमावि तहको तृतीय श्रेणीमा मेरो स्थायी नियुक्ति भएको थियो । २०६९/२/१९ गते निमावि द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई शैक्षिक सत्र २०७१ वैशाखदेखि १ ग्रेड खाँदै आइरहेको थिएँ । फेरि शिक्षक सेवा आयोगबाट मावि तहमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उत्तीर्ण भई २०७१/५/१६ गते स्थायी नियुक्ति पाएँ र त्यसवेला मेरो तलब रु.२४,४०० र १ ग्रेड थियो । शैक्षिक सत्र २०७२ वैशाखदेखि मेरो त्यही ग्रेड कायम हुने हो या १ ग्रेड थप हुने हो ?
अकवर हवारी, श्री नेपाल राष्ट्रिय गीता गजेन्द्रराज जोशी मावि, सुखचैना, वीरगंज–२४, पर्सा
तह नै परिवर्तन भएको खण्डमा तल्लो श्रेणीको ग्रेड कायम हुँदैन । माथिल्लो तहमा नियुक्ति लिएको मितिले १ शैक्षिक सत्र पूरा भएपछि मात्र नयाँ ग्रेड शुरू हुन्छ ।
पेन्सन लिन पाउँछु ?
म २०४८ देखिको प्रावि स्थायी शिक्षक हुँ । २०६० मा मावि खुलाबाट स्थायी भई कार्यरत छु । अब मैले मावि तह अनुसारको पेन्सन लिई स्वेच्छिक अवकाश लिई पेन्सन लिन सक्छु कि सक्दिनँ ?
पारस लुइँटेल, शिक्षा विकास मावि, लेटाङ, मोरङ
तपाईंको सेवा यदि निरन्तर छ भने सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब तपाईं स्वेच्छिक अवकाश लिई निवृत्तिभरणमा बस्न सक्नुहुन्छ ।